@mmunited - Steem - GoldVoice.club
It is too cool in my country
It is only 18 degC and It would not be too cool foraeurope country. But It has been too cool for the country with warm climate. I heardarurmor that cold wave will go through my country. That's why the weather is too cold. We have problems with winter.…
Report for FPL week-18
I have got 68 points and it is the same as previous week. My team mature and steady now. I made wrong dcecisions while choosing captain. I can get more points if I choosearight captain. This is needed to be fixed next week.
Who should be my team's captain for week 19?
ဒီတစ်ခါမှာတော့ နံပါတ် ၉ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကို @bobokyaw က သူ့ ဂြိုဟ်တွေကို mancer ကို ရောင်းသွားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကတော့ အတော့်ကို နည်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်ဆို ဒိထက် မက ရသင့်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် Stardust ရဲ့ ပေါက်ဈေးက တစ်ခုကို 0.002 St…
Gold III ရောက်ပြီ
ဒီနေ့တော့ Gold III အထိကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေကတော့ ပြင်းထန်နေပါတယ်။ ဒီနေရာကို လွယ်လွယ်နဲ့ တိုက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါးပွဲဆက်တိုက် ဆက်တိုက်နိုင်ပြီးမှ ရောက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Gold ရောက်သွားပြီဆိုတော့ တန်းဝင…
NC colony မှာ ဘာမှလဲ လုပ်စရာ သိပ်မရှိလှဘူး။ အဲဒီအတွက် ယာဉ်တွေပဲ စွတ်ထုတ်နေပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ စုစုပေါင်း ယာဉ်စီးရေ ၁၅၀၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂြိုဟ်ကတော့ စုစုပေါင်း ၇၂ လုံးအထိ ရှိထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေမှုပေါင်းက ၂၇၀၀ ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မ…
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ဝက်ဆိုက် ပိုင်ရှင်တွေကို သတင်းကောင်း တစ်ခု ပါးချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Steempress plugin ကို မိမိဝက်ဆိုက်မှာ install လုပ်ပြီးတော့ အပိုဝင်ငွေရှာနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ မိမိရေးသားတဲ့ စာပေ၊ အကြောင်းအရာတွေက ကိုယ်ပိုင် ရေး…
Today I opened this4beta packs. I got only2gold foil cards, 1 epic card and3rare cards The rest are common cards.
ထုတ်လုပ်မှု ပိုင်းမှာတော့ ဂြိုဟ် အလုံး ၇၀ နဲ့ အဆင့် ၁၀ ကို ရောက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်းဆ ထားပြီးသားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ ဂြိုဟ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက အရမ်းကို များပါတယ်။ တစ်ချို့တွေ ဆို အလုံး ၁၀၀ ကျော်နေပါပြီ။ အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်န…
ဒီနေ့ကတော့ မိုးသည်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းမှာ နေတဲ့ သူတွေ အတွက်ကတော့ မိုးသည်ထန်စွာ ရွာသွန်းတယ်ဆိုတာက ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ် ဆိုပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းမှာ နေတဲ့ သူတွေကတော့ ဒါက ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခ…
ယာဉ် ၁၂၀၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီ
NC အပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နဲလာနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် SM ဘက်ကို ပြန်လည့်လာကြပါတယ်။ Drugwars ကလဲ ပြန်လည် ဆွဲဆောင်မှုတွေ လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ Jobs တွေ ဘာတွေနဲ့ ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလာပါတယ်။
ယာဉ်ကတော့ ၁၂၀၀၀ ကျော်ခဲ့ပါပြ…
Super NextColony Contest --- 2º round --- Win an IMPERIUM CHEST
Good morning everyone from @steem-ace, @nextcolony and @battlegames
Well,aweek ago I posted withacontest to winabeautiful Imperium Chest from the NextColony game. Unfortunately, there were no winners.
Now, I'm doing the second round to give you allachance to participate and win this beautiful Imperium Chest worth 99 steem:
RP 66 ကို ရောက်ပြီ
နောက်ဆုံးမှာတော့ RP ၆၆ ကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရောက်ဖို့ ဆိုတာ သိပ်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ RP ၆၆ နဲ့ အထက် ရှိတာ ဆယ်ယောက်လောက်ပဲ ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ ငါးယောက်လောက်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ RP တက်တယ်ဆိုတာ Vote bot တွေ သု…
FPL week-5 player selection
ဒီအပတ်မှာကတော့ Gylfi Sigurdsson (EVE) £7.8m က အစွမ်းပြလာလေ မလားလို့ ထင်မှတ်မိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လေးပတ်ဆက်တိုက် ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ၀.၂ m ဈေးလျော့ကျခဲ့ပါတယ်။ စစချင်း ပေါက်ဈေးက 8 m ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပတ်မှာတော့ Ashley Barnes (BUR) £6.7m ပြန်ပြီး ခြေစွမ်းပြလာ လေမလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုးပေါက် ကန်သွင်းမှု ၁၅ ကြီမ် ပြုလုပ်ထားပြီး ၁၁ ကြီမ်က ဂိုးဧရိယာထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုးပေါက်ကို ၈ ကြီမ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးနဲ့ ပွဲမတိုင်ခင်အထိ သုံးပွဲ…
DS 100000 has been reached
ယာဉ်တွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့မှု ကနေ ရရှိတဲ့ ယူရေနီယံ တစ်သိန်း ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်ကတော့ ၉ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကတော့ အဆင့်ပြန် ကျနေပါပြီ။ အချို့သူတွေက ဂြိုဟ် ၉၀ ကျော်အထိ ပိုင်ဆိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ လိုက်ပြိုင်နေလို့ မဖြစ်တော့ပါ…
Project Delta 001- "Saving Your Fleets"
I would like to offeraservice to rescue your fleet.
If the planet of user "B" has been seiged by user "A".
A has intention to attack on B later. May be his attack is on the way.
Lego တုံးဆက် ကစားနည်း
ဟိုတနေ့က ရန်ုကန်က အပြန်မှာ LEGO တွေ ဈေးချရောင်းနေတာနဲ့ တွေ့လို့ ဝယ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ပုံမှတ် ၁၀၀၀၀ ကျော်ရောင်းတဲ့ ဟာကို အဲဒီနေ့ကတော့ ၄၆၀၀ ကျပန်နဲ့ပဲ ဝယ်လို့ ရလိုက်ပါတယ်။ Lego တွေက ကစားလို့တော့ အတော်ကောင်းပါတယ်။ ပေးရတဲ့ ဈေးနဲ့လဲ တန်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဈေးလျှေ…
Steem Fest သို့ ခရီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘာတွေ ကြုံတွေ့ရမယ် လို့ မျှေလင့်ထားသလဲ
သင့်အနေနဲ့ ဒီဝက်ဆိုက်မှာ Steem Fest4ကို သွားမယ့် လက်မှတ်ကို Steem နဲ့ ဝယ်ဖို့ အချိန်ရှိပါသေးတယ်။ Plankton Price! Visit the official website
နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်းမှာ မတူညီ ကွဲပြားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ကျင်းပတဲ့ Steem Fest ကို တက်ရောက်ရတဲ့ အတွက် ကျွန်တ…
600 meta skills
Meta-skill 600 ပြည့်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက တစ်ကယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ အချိန်တွေ ကုန်ကြမ်းတွေ အများကြီ: အကုန်ခံပြီးမှာ ရနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Meta-skill တွေက အတော်ကို အသုံးဝင်ပါတယ်။ မရှိ မဖြစ်လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ သူ့မှာ mine တွေအတွက် စကေးတွေပါသလိ…
FPL week-4 final result
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမယ် ၅၃ မှတ်အထိ တက်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပျမ်းမျှ ရမှတ် က ၅၇ မှတ်ဆိုတော့ ပျမ်းမျှရဲ့ အောက်မှာပဲ ရှိနေပါတယ်။
FPL Week-4 selection
ဒီ အပတ်မှာရော ဘယ်သူတွေကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ။ ဒါတွေကတော့ FPL scout team က ရွေးချယ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ချင်မှန်မယ် မှားချင်မှားမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအတိုင်းမှန်းဆပြီးတော့ ရွေးချယ်တာထက်တော့ ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သူကတော့ အဲဗာတန်ရဲ့ ဘယ်တောင်ပံ ခံစစ်သမားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရမှတ် ၁၈ မှတ်အထိ ရထားပါတယ်။ ဂိုးဖန်တီးမှု တစ်ကြီမ် လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်ကြီမ် ဂိုးမပေးရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကူးစက် မဟုတ်သော ရောဂါများ−၁
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကူးစက် မဟုတ်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနှုန်းက အတော်ကို မြင့်မားလာပါတယ်။ ဒီရောဂါတွေက ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေ မှာတင် မဟုတ်ပဲ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာပါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ လူနေထိုင်မှု ပုံစံကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ကိုင…
ဒီရက် ပိုင်းကတော့ အတော်ကို ကံကောင်းနေတယ် လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကနဲ့ တနေ့က စုစုပေါင်း ဂြိုဟ် ၅ လုံးတောင် ရှာတွေ့ပါတယ်။
FPL Week-3 final result
ဒီအပတ်မှတော့ ၃၅ မှတ်ပဲ ရလိုက်ပါတယ်။ အဓိက အချက်ကတော့ မန်ယူ ရှုံးသွားတာ ကြောင့်ပါပဲ။ ဂိုးသမားက ဂိုးတွေ ပေးလိုက်ရသလို Rashford ကလဲ ပင်နယ်တီကို ချော်ကန်သွားပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ မန်ယူ ခြေမှန်ပြန်ရ နေတယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စတာပါ။ မန်ယူဖန်တွေ စိတ်မဆိုးရဘူးနော…
Uni >>> Oct-1
လာမည့် အောက်တိုဘာလ တစ်ရက်နေ့မှာ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး ယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းသုံးကြမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီတစ်ကြီမ်မှာတော့ ယူနီသမားတွေကလဲ ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူးလို့ ကြားရပါတယ်။ ပြောခဲ့တဲ့ အကြီမ်ပေါင်းလဲ များနေပြီ ဆိုတော့ ထပ်ပြီးတော့ မပြောချင်ကြလို့ နေမှာပါ။ C…
Drugwars သို့ တစ်ကျော့ပြန်
ကိုနေလှိုင်စိုးရဲ့ ပိုစ့်ကို ဖတ်လိုက်ရတော့မှပဲ job အကြောင်း သတိထားမိတော့တယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ စပြီး တိုက်ခိုက်နေပါပြီ။ Drug တွေကို heist ထဲထည့်လိုက် အကောင်တွေ မွေးလိုက် လုပ်နေတာကလဲ မဆိုးပါဘူး။ Pantheon ကလဲ အဆင့်မြှင့်လာလေလော ပိုက်ဆံ ရှာရခက်လာလေလေပါပဲ။ အဲဒ…
FPL week-2 final result
ဒီတစ်ပတ်မှာကတော့ အဆင့် ၇၁ အထိကို တက်လှမ်း နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်အပတ်ကတော့ သိပ်ပြီး အခြေအနေ မကောင်းလှပါဘူး။ ဒီအဆင့်ကို ထိမ်းထားနိုင်ဖို့ မလွယ်လှဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
လူစားလဲ ချင်တဲ့ လူအချို့ ရှိပေမဲ့ အမှတ် အလျော့ခံပြီး မလဲ သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်…
အဆင့် ၅ ကို ရောက်သွားပြီ
တကယ်က အဆင့် ၄ အထိကို ရောက်နေတာပါ။ ပုံကို သိမ်းမထားလိုက်ရတဲ့အတွက် အခြားသူက ကျော်တက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်ယူလို့ မရတော့ဘူး ဖြစ်သွားပါတယ်။
Exp II လေး ငါးကောင်ကတော့ ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်တော့ မှာပါ။ ဂြိုဟ် ရှာလို့ တွေ့မတွေ့ ဆိုတာကတော့ အခုစာရေးနေရင်းနဲ့ကို သိရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရေးနေတုန်း noti တက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ မတွေ့ဘူးလို့သာ မှတ်ပါလေပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုဖို့ အတွက် လောဆော်နေတာတော့ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင်တော့ မသုံးဖြစ်ဖူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ တစ်ကယ် အသုံးပြုဖြစ်ပြီ လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ esteem သုံးတဲ့ အခါမှာ သူက ယူနီကုဒ်ကိုပဲ ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ Zawgyi …
မေန့က ျဂိုဟ္ တစ္လံုး ထပ္ေတြ့ပါတယ္။ Common copper ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္ေတာ့ တန္ဖိုးမရိွလွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မေတြ့တာ အၾကာၾကီး ေနျပီးမွ ျပန္ရွာေတြ့တဲ့ အတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈေတြ တိုးလားေစပါတယ္။ အရင္လို တစ္ေန့ထဲကို ျဂိုဟ္ သံုးလံုး ျပန္ရွာေတြ့ေတာ့မလား ဆိုျပီး …
FPL week-2 analysis
ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပမယ့္ သူေတြကေတာ့ FPL ဒုတိယ အပတ္မွာ ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး တစ္ေယာက္ကေတာ့ Richarlison ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ေတာင္ပံမွာ ကစားသလို အလယ္တန္းမွာလဲ ကစားနိုင္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ရာသီတုန္းက everton က ကစားေဖာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Gylfi sigurds…
အဆင့္ ၆ ေရာက္သြားျပီ
ကို ထြန္းနိုင္ဝင္းဆီကေန ျဂိုဟ္ အလံုး ၂၀ ဝယ္ျပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ အဆင့္ ၆ အထိကို တက္လွမ္း နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆင့္ ၅ ေလာက္ေတာ့ ေရာက္နိုင္တယ္ လို့ထင္ပါတယ္။ လက္ထဲမွာ ျဂိုဟ္ သံုးလံုးေလာက္ ရိွေနပါေသးတယ္။ ထပ္ေပါင္းထည့္လို့ ရပါေသးတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေပါင္းမထည့္ေသးပဲ ေစာင္…
Bounty #04: Jack foundaship
Another miserable day of NC
Image is taken from https://spycolony.herokuapp.com/delay.html
ဒီေန့ အဖို့ေတာ့ ဂိမ္းကစားလို့ ရမယ္ မထင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာေတြ လုပ္ျပီးျပီ ဆိုေတာ့လဲ သိပ္ေတာ့လဲ ကိစၥ မရိွလွပါဘူး။ ဒါကေတာ့ blockchain ရဲ့ ျပႆနာ တစ္ခုပါပဲ။ Custom json ကို ဂိ…
FPL week-1 final result
ေျပာရရင္ေတာ့ အေတာ္ေလးကို ကံမေကာင္းဘူးလို့ပဲ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုကံမေကာင္းတာမို်းလဲ။ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ညံ့တာလဲ ပါတာေပါ့။
ပထမဆံုး ေျပာခ်င္တာက ဂိုးသမားပါ။ မန္းစီးတီး ဂိုးကိုလဲ ေရြးထားတယ္။ မန္စီးတီးက ငါးဂိုးျပတ္နဲ့ နိုင္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂိုးသမားက ျပိုင္ပဲြမွာ မပါတဲ့အတြက္ အမွတ္ မရဘူး။ အရန္ဂိုးသမားကလဲ ပဲြထြက္စာရင္းမွာ မပါပါဘူး။ အဲဒီမွာ ၁၀ မွတ္ ဆံုးရံႈးသြားပါတယ္။ မန္စီးတီး ငါးဂို…
ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အမွတ္ သိပ္မရလိုက္ပါဘူး။ ပဲြသံုးပဲြက်န္ေနေသးေပမယ့္ ရမွတ္ကေတာ့ ၃၈ မွတ္ပဲ ရိွေနပါေသးတယ္။ အဓိက မွားသြားတာကေတာ့ အဂဲြရိုးကို အသင္းေခါင္းေဆာင္ ခန့္လိုက္မိတာပါပဲ။ သူက ၅ မွတ္ပဲ ရေတာ့ triple captain နဲ့မွ ၁၅ မွတ္ပဲ ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Keane ကို သာ အသင…
Ships 3000 ျပည့္ေတာ့မယ္
အခုဆိုရင္ ယာဉ္ အေရအတြက္ ၂၈၆၉ စီး ပိုင္ဆိုင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္ကာလမွာ အစီးေရ ၃၀၀၀ ျပည့္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစီးေရ ၃၀၀၀ ျပည့္ခဲ့ရင္ေတာ့ ယာဉ္ ထုတ္လုပ္မႈကို ခဏရပ္နားျပီး ကုန္ၾကမ္း ထုတ္လုပ္မႈကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။